Ntughari Mgbasa Ozi China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ntughari Mgbasa Ozi - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ntughari Mgbasa Ozi)
Ọnụ ụzọ mpempe ụzọ maka ikpuchi Ọnụ ụzọ ụgbọala na-arịgo
Ihe Nlereanya.: garage door
Ọnụ ụzọ na-abaghị uru bụ ụzọ dịgasị iche, nke nwere akụ na ụba na nke ọma. Chọrọ ịmatakwu ihe, biko lee n'okpuru: A na-eji ọnụ ụzọ dị elu nke Hongfa maka ngwa ndị dị ka ọnụ ụzọ dị elu nke a na-ahụ maka ụlọ ọrụ LEED, ụlọ nche (ndị uweojii, ụlọ ọrụ agha, ebe ndị eji eji eme ihe), oghere maka ụlọ ọrụ nsị (ígwè,...
Akwụsị Mgbasaozi Azụmahịa na-arụ ọrụ elu
Akwụsị Mgbasaozi Azụmahịa na-arụ ọrụ elu Ụlọ ahịa dị na Hongfaịpụ nke Ụlọ Elu, na-adabere maka ụlọ dị ọcha, n'ụzọ dịpụrụ adịpụ maka ịmepụta ntanetị a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-ejikọta ebe a na-etinye ihe nkwụnye, na-egbo mkpa maka saịtị. Ejiri mpempe ọkụ na ogwe ígwè (Wind resistant) guzobere ákwà...
Ọnụ Ụzọ Ndozi Na-agbanwe Ntugharị na-agbaghaghachi
Ụlọ na-arụkwa ụgbọala na-echekwa ebe obibi Ọnụ ụzọ ụzọ nke ụlọ ntà nwere nnukwu ụlọ, nke nwere ike ịdị na-adịgide adịgide, nke na-eguzogide ya, nke na-eme ka a na-ebipụta akwụkwọ osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala na-eji ụgbọala eme ihe na-eji usoro ọrụ dị elu ma na-eji ọgba agọ hofic mee ngwa ngwa mepee ọnụ ụzọ nkwụsị...
PVC High Speed ​​Ndozi
PVC High Speed ​​Ndozi Uru: 1.Di Zipper Rail Zipper Ejikere ịrụ ọrụ onwe gị: iji zere oge igbu oge idozi ya. 2. Ncha: ákwà mgbochi ahụ bụ ìhè. 3. Nchebe: foto foto na airbag iji mee ka obi sie gị
Nnukwu Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mgbasa Ọrụ Na-arụpụta Oké Mgbasa Ozi
Nnukwu Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mgbasa Ọrụ Na-arụpụta Oké Mgbasa Ozi Usoro nchịkwa ugboro ugboro, nke nwere ọnụnọ dị elu. A na-ejikarị ya eme ihe na-emepụta ihe oriri na-edozi ahụ na ngwá ọrụ ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na ebe ndị ọzọ. Ngwá dị elu nke igwe na-acha nchara anụ ọkụ, mgbatị nke na-eme ka a ghara imebi ihe, adịghị...
Ntughari nke ihe eji eme ihe n'ilekọta ndochi ngbochi
Ihe Nlereanya.: HF-E1001
Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-eme ka ndị mmadụ na-agbapụta ụgbọ mmiri Nkọwapụta ngwaahịa: 1. Ịchapu gburugburu ebe obibi site n'èzí, ọ bụghị naanị uru maka ọnọdụ ọrụ. Izere ihe mkpofu na-abaghị uru pụtakwara ike ịzọpụta, nchedo gburugburu ebe obibi, nchebe nke ngwaahịa na ịrụ ọrụ arụmọrụ ka ukwuu. 2. Ụlọ nche ezumike...
Okpokoro ihe nkwụsịtụ nke nwere onwe ya na-eme ka ihe dị mkpa dị ka ndị a: Uru: ihe na-adịghị mma iji na-enwe friza ụlọ okpomọkụ. Nleghachi onwe onye mgbe ọ na-arị elu, mgbe ọ na-emetụta ákwà mgbochi ahụ. Technology Category: Nkà na ụzụ na-ekwu okwu Ihe eji eme ihe: A na-eji ya eme ihe na-emepụta ihe oriri na-edozi...
Ntughari Mgbasa Ozi Ntughari Ntughari Ọnụ Ụzọ Ntugharị Mgbasa Ozi Ntughari Onwe-gi Ntughari ngwa ngwa simpe Ntughari ncha akwa Ntughari elu Ntughari Uzo di elu